कृष्ण खनाल सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको विप्लववादी नेकपाले गत साता गरेको ‘नेपाल बन्द’ विगतको तुलनामा प्रभावकारी देखियो । ठाउँठाउँमा ‘अज्ञात समूह’ले बम राखेको हल्ला वा ‘बेवारिसे’ वस्तु सुरक्षाकर्मीले निष्क्रिय बनाएको समाचार बने । गत फागुनदेखि बन्दको शृङ्खला बढेको छ । यसले विद्यालयबाहेक अन्यत्र खासै प्रभाव पारेको थिएन । यस पटकको बन्दअघि उनका कार्यकर्ता प्रहरी भिडन्तमा मारिएका थिए । अघिल्लो माओवादी हिंसाकालमा पनि ‘अज्ञात समूह’, ‘बेवारिसे वस्तु’ ‘गैरन्यायिक हत्या’ जस्ता शब्दावली प्रयोग हुन्थ्यो । संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको...
सुुचनाको सहज पहुुँच भएको सञ्चारको अत्यन्तै सहज माध्यमका रुपमा चिनीदै आएको रेडियोको ईतिहास अठारौं शताब्दीबाट शुुरु भएको मानिन्छ। विकीपेडीयाका अनुुसार जर्मनी नागरीक मार्कोनीले १८९४ मा रेडियोको अविस्कार गरीसकेपछी संसारमा रेडीयोको अत्यन्तै महत्व बढ्दै गएको मानिन्छ। संसारमा चलेको प्रथम तथा दोश्रो विश्व युुद्धपछी भएका संञ्चारको परिवर्तनसंगै मानव समुुदायलाई सुु-सुुचीत गर्ने अभियान संगीतको माध्यमबाट भएको हो। युुद्धले थिलो-थिलो भएको मानव जगतले विस्तारै विकास तथा मनोरञ्जनपनी संगै जोडिएर आउदछ। जसमा रेडीयोको भुुमीका अत्यन्तै महत्वपुुर्ण रहेको...
हाम्रो देशमा धेरै जस्तो घरपरिवारको आर्थिक आय आर्जनको प्रमुख स्रोत कृषि हो । कृषि क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६४ प्रतिशत खटिएको छ । हाम्रो देशको कुल ग्रहास्थ उत्पादन ४० प्रतिशत हिस्सा कृषि र कृषिजन्य उत्पादन मार्फत प्राप्त हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई वृद्धि विकास र विस्तार गर्नको लागि दिगो कृषिको भूमिका मुख्य रहन्छ । दिगो कृषि भन्नाले हाल भएको स्रोत साधनहरु जस्तै माटो, पानी, वन जंगल आदिको उचित प्रयोग गरी वर्तमान आवश्यकताहरु...
मिलन गाहा बुटवल । तिनाउ गाउँपालीकामा बिगत ७ बर्षदेखी खानी सञ्चालनमा आएको हो । सो खानी सञ्चालन पछी दोभानबासीको आम्दानीको श्रोत भने बलियो बनेको छ । जस्का कारण जिबीको पार्जनमा पनि सहज वातावरण बनेको छ । खानी संचालन भएदेखी दोभानबाट अधीकांश युुवामा हुुने बिदेश पलायन रोकिएको एआर एम सप्लायर्सका राम थापाको भनाई छ । आफुु पनि बिदेशमा धेरै चक्कर काटेपछी हाल खानी सञ्चालन पछी यही आफ्नै भुुमीमा आफ्नो परिवार संग...
प्रेम सुनार बुटवल । गुल्मी ईस्माका चिन्तबहादुर दर्जि त्यस भेगमा कहलाएका लुगा सिलाउने सिपालु ब्यक्ति हुन । विवाह देखि चाड पर्वहरुमा उनको पसलमा कोट पाईन्ट देखि हरेक कपडा सिलाउनेहरुको भिड बढे कै हुन्छ । ब्यस्तताका बावजुद पनि यसपालीको दशैमा उनले छोरालाई छाँटिलो कोट पाईन्ट र छोरीहरुलाई पनि त्यस्तै भलाद्मी कपडा सिलाई दिन चाहन्छन । तर उनैका छोरा छोरीलाई बाबुले सिलाएको कपडा लगाउने मन छैन । उनिहरुको रहर उनै रेडिमेड कपडामा छ...
देशका केहि सिमित पत्रकारहरु सरकारी कार्यालयबाट सहयोगका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको भिक माग्दै घुम्न जाने र सेल्फी खिचेर फेसबुकमा राख्दै तमासा देखाउने गरेको सायद धेरैले देख्नु भएकै छ होला । पत्रकारिता सम्मानित पेशा हो । सरकारी तथा जुन कुनै संस्था र ब्यक्तिलाई दोहन गर्ने विरुद्ध कलम चलाउने पेशा हो । तर उसैले त्यसरी दोहन गर्छ भने त्यो पेशाका नामधारी त्यो कलंकित पात्र हो । पत्रकारले वैद्यानिक रुपमा पाउने सुचना (विज्ञापन) बाहेकमा...
नौ बर्षे सेवामा प्रतिफल शून्य
लक्ष्मी गुप्ता नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मंत्रालयको स्थानिय स्वायतं सासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उफदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको लगानीमा बिगत २०६६/२०६७ साल देखि स्थानिय सासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम मार्फत देश द्धन्दको चपेटामा खस्कीरहेको अवस्थामा र जनप्रतिनिधिहरु पनि नभएको अवस्थामा तथा गा.बि.स.र न.पा. वडाका सचिवहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई नागरिकहरुको लागि काम गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानिय तहको हरेक गा.बि.स.मा १ जना...
सर्व प्रथम त, हेर बुढी तँलाई ब्या गरेको यतिका वर्ष पछि पहिलो पटक ले तेरा खुट्टा, शिर नुहुराएर ढोई दिुन्छु । र, यति डर लाग्दो हतियार जस्तो अधिकार पाएकोमा बधाई पनि दिन्छु । आज भदौ एक गते बिहान तँ र म विस्तराबाट उठेर चिया पियौं । त्यस पछि म बाहिर निस्कें । सदा झै घर पिएको चियाले मेरो चित्त बुझ्दैन । म बजारमा सदा पिउने चिया पसलमा पुगे । उनै...
आदरणिय डाक्टर गोविन्द केसी ज्यु, सर्वप्रथम त नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि हजुरले जिवन कै बाजी राख्दै आउनु भएकोमा यहाँलाई साधुवाद टक्राउन चाहन्छु । तपाईको अनशन मेरो ब्यक्तिगत रुपमा समर्थन र सम्मान छ । यद्यपी सर्वसधारणको गुनासो मैले यहाँलाई अवगत गराउन चाहेर यो खुल्ला पत्र लेख्ने जमर्को गरेको हुँ । डाक्टरसाव, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो अतिसंवेदनशिल क्षेत्रमा त्यो पनि सरकारी तलव खाएका स्वास्थ्यकर्मीहरु यतिका दिन देखि आन्दोलनमा उत्रिदा आम सर्वसाधरणहरु स्वास्थ्य...
न आफु रहे न धन ……………………..!
नारायण वली बुटवल । मुलुकलाई नै परिवर्तन गर्ने सपना बोकेर जनयुद्धमा होमीएका सल्यानका ३७ बर्षिय टेक बहादुर वली आजातले मुलुकमा आएको परिवर्तन त देखे । तर उनको जिवनमा परिवर्तन कहिल्यै आएन, उनी अभावै अभावमा बाचे, उनको छातीमा टेकेर केही मानिसहरु सिंहदवारको सिहासनमा छिरे र मोज गरे तर उनलाई उपचार खर्च समेत जुटेन । त्यही परिवर्तनकारी योद्धाले बिहिबारदेखि सदाकालागी यो धर्तिबाट विदा भए । १२ बर्षे जनयुद्धका क्रममा यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनु...